Filtrer les éléments par date : lundi, 17 février 2020
lundi, 17 février 2020 22:55
Coronavirus: Mandalo fitiliana mari-pana ireo mpandeha aty Sambava
Aty amin'i seranam-piaramanidina Sambava, mandalo fitiliana mari-pana ny mpandeha rehetra avy any Antananarivo ho fisorohana, ny fidiran'ny aretina Coronavirus ato amin'i faritra SAVA.
Ny zanany lahy, tsy dia salama saina, tonga tao amin’ny Fokontany Ankafy, Kaominina Alasora, Antananarivo Avaradrano nangataka ny hamafana ny anaran’ny rainy amin’ny rejisitry ny Fokontany no nampiahiahy ny Sefo Fokontany, satria tsy nisy filazana fahafatesana nandalo teo aminy.
Nampandre ny Polisy avy hatrany ity farany ary dia nanokatra fanadihadiana ireto farany taorian’ny fitsirihana natao. Nampanantsoina nanaovana famotorana ny vady aman-janak’ilay raim-pianakaviana, tamin’izay no nibaradaka iretsy voalohany fa maty tamin’ny alarobia ilay rangahy ary nalevin’izy ireo ao anaty trano ipetrahan’izy ireo ihany.
Nofongarina ny razana.
lundi, 17 février 2020 21:40
Kitra – Coupe Arabe U20: Madagasikara 4 – 3 Djibouti
Nibata fandresena voalohany ny Barea tamin’ny lalao atrehany amin’ny « Coupe Arabe U20 » any Arabia Saodida. Nandresy an’isa 4 noho 3 i Madagasikara androany nanoloana an’i Djibouti, tamin’ny lalao natao tao amin’ny kianja Al Riyad.
Efa nitarika tamin’ny isa 4 noho 2 ny Barea tamin’ny fihodinana voalohany.
Mpilalao mendrika tamin’ity lalao androany ity i Todisoa Rafizy André (N°6).
Fihaonana amin’i Bahrein ny lalao manaraka hatrehin’i Madagasikara ny alakamisy 20 febroary izao amin’ny 6 ora hariva.
lundi, 17 février 2020 19:55
Mahanoro: Nankahery sy nitondra fanampiana ho an’ireo traboina ny Praiminisitra
Nidina avy hatrany, nijery ny zava-misy sy nankahery ny traboina, tany amin’ny Distrikan’i Mahanoro - Faritra Atsinanana, ny solontenam-panjakana notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny alahady 16 febroary 2020, taorian’ny nandalovan’ny andro ratsy nateraky ny rivodoza Francisco.
Dibo-drano ny tanànan’i Mahanoro, nisy ny rava trano, maro ireo traboina sy tsy manan-kialofana, ary simba ny fambolena.
Nambaran’ny Praiminisitra fa “Tsy maintsy mifanampy isika satria samy Malagasy ». Ankoatry ny fanolorany sakafo ho an’ny traboina tao an-tampon-tanàna, dia nitety ireo trano misy ny traboina tao amin’ny Fokontany Ambilabe, any avaratry ny tanànan’i Mahanoro ny Praiministra. Voa mafy nandritra ny fandalovan’izao andro ratsy izao ity Fokontany ity, ary raha naneho ny hetahetany ny mponina tany an-toerana dia voatonona ny fanamboarana ny CEG Ambilabe, izay rava tanteraka.
lundi, 17 février 2020 19:43
MFM: Mampivondrona ireo mpiara-mitolona hiatrika ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika
Miomana amin’ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika ny MFM. Mampivondrona ireo mpiara-mitolona efa ela tsy hita sy ireo tany anaty fikambanana samihafa hanatevin-daharana, hanome hery sy tanjaka indray ny MFM ny antoko hiatrehana izany.
Taratr’izany ny lanonana fifampiarahabana nahatratrarana ny taona 2020 nataon'ny mpikatroka MFM tao Fianarantsoa ny sabotsy 15 Febroary 2020 teo.
Nivoitra tamin’ity fihaonana ity fa tsy hanonga-panjakana ny MFM, tsy hanohitra, tsy hiaraka amin'ny antoko mpanohitra, tsy hiandany amin'ny fanjakana fa hitondra hevitra, fomba fiasa hanitsiana ny làlana diso nitondrana ny Firenena.
(Loharanom-baovao: Tambatra Antoko)
lundi, 17 février 2020 16:45
Rugby: Nodimandry i Doda Be, mpilalaon’ny USA Ankadifotsy
Nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-22 taonany, ny 16 febroary 2020 teto Antananarivo, i Rajomaharo Nirina Rarivoson, fantatra tamin’ny solon’anarana hoe Doda Be teo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava.
Tao amin’ny klioba Ankoay no nanombohany nilalao, avy eo nifindra tao amin’ny USA Ankadifotsy. Isan’ireo mpilalao nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy latsaky ny 19 taona na XV Makis U19, andiany 2016, i Doda Be.
lundi, 17 février 2020 16:32
Ambalavao: Notifiriny ankitsirano ny raibeny, nitifi-tena ilay zandary avy eo
Maty nitifi-tena tamin'ny basim-panjakàna, zandary kilasy faharoa iray miasa ao Mandrosonoro, Distrika Ambatofinandrahana rehefa avy nitifitra ka nahafaty ny raibeny.
Tamin'ny fandalovany tao Ambalavao raha namita iraka tany Ambositra, ny alin'ny 16 hifoha 17 febroary 2020 no nitrangan’ity loza ity.
Nidina any an-toerana avy hatrany vao nahazo fanairana ny komandin'ny vondrotobim-paritry ny Zandarimaria Ambatofinandrahana hanao fanadihadiana lalina ahafantarana ny tena antony.
lundi, 17 février 2020 16:19
Kitra – Ligy Atsinanana: Tompondaka ny AS Fortior Toamasina
Lavon’ny AS Fortior Toamasina tamin’ny isa 2 noho 1 ny ASCOMI Mahanoro nandritra ny lalao famaranana ny fiadiana ny tompondakan’ny ligy Atsinanana, Divizionina Voalohany amin’ny baolina kitra, taona 2019-2020.
lundi, 17 février 2020 16:06
Ny Rado Rafalimanana: Nalefa nody fa miverina eny amin'ny Fitsarana rahampitso
Voaantso teny amin'ny Toby Ratsimandrava i Ny Rado Rafalimanana androany maraina. Tonga teny izy dia nomena taratasy fampahafantarana fa mila miseho eny amin'ny Fampanoavana ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo.
Vao naharay an'izay taratasy fampahafantarana azy ity filohan'ny ONG Ny Fanahy no Maha Olona dia niazo avy hatrany teny amin'ny Fampanoavana.
Nomena taratasy fampahafantarana indray koa izy tao milaza fa ilain'ny Fitsarana izy rahampitso ka mila miveria eny Anosy.
Tsy nisy famotorana natao an'i Ny Rado Rafalimanana na teny Andrefanambohijanahary na teny Anosy, tsy mbola voafaritra mazava ihany koa ny iampangana azy fa tombatombana avokoa hatreto no ré.
lundi, 17 février 2020 16:04
Ambilobe: Potiky ny tora-bato ny birao, may ny fiara tao amn'ny Kaomisarian’ny Polisim-pirenena
Nampisavorovoro ary niteraka fahatezeram-bahoaka teto Ambilobe ny fampitam-baovao tamin'ny facebook nilaza fa voasambotry ny Polisy tany amin'ny Kaominina Mantaly Distrika Ambilobe, omaly 16 febroary, ny tompon'antoka tamin'ny famonoana vehivavy iray mitondra vohoka 7 volana, tsy hita namboka ny 03 febroary 2020.
Nirohotra nandeha tao amin'ny biraon'ny Kaompanian’ny Zandarimaria ny vahoaka omaly hariva hitady io mpamonolo olona voasambotra io. Rehefa tsy hitan’izy ireo tao dia niazo ny biraon'ny Kaomisarian’ny polisim-pirenena ny vahoaka ka namotika sy nitora-bato ny birao ary nanimba sy nandoro fiara nitoby tao rehefa tsy nahita ilay voarohirohy.
Niditra an-tsehatra ny Zandarimariam-pirenena nanampy ireo namany niaro ny Mpiasa sy ny tobin'ny Polisim-pirenena.